Wadahadalladii Masar iyo Itoobiya ee Nile oo fashilmay | Xaysimo
Home War Wadahadalladii Masar iyo Itoobiya ee Nile oo fashilmay
Wadahadalladii Masar iyo Itoobiya ee Nile oo fashilmay
Kulanka oo socday laba maalmood ayaa ahaa wareegii ugu dambeeyey wada-hadallo ay fududeysay wasaaradda maaliyadda Mareykanka, oo soo farogelisay murankan kadib markii madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi uu la hadlay madaxweyne Trump, oo ay xulufo dhow yihiin.
Itoobiya ayaa sheegtay in biyo-xireenku uu noqon doono warshadda ugu weyn Afrika ee koronto ka dhalisa biyaha, uu muhiim u yahay dhaqaalaheeda. Hase yeeshee Masar ayaa ka cabsi qabta in mashruucan uu waxyeeleyn karo webigan oo 90% soo saara biyaha laga cabo dalkaas.
Fitsum Arega, oo ah safiirka Itoobiya ee Mareykanka, ayaa qoraal uu soo dhigay twitter ku sheegay in wadahadallada ay dhamaadeen ayada oo aan la gaarin heshiis kama dambeys ah.
Saleshi ayaa sidoo kale sheegay in wasaaradaha biyaha iyo arrimaha dibedda Itoobiya ay “wadatashiyo qaran yeelan doonaan maalmaha soo socda.”
Warbaahinta ku xiran dowladda Itoobiya ee FANA ayaa sheegtay in qodobka la isku mari waayey wadahadalladii ugu dambeeyey uu yahay heerka la buuxinayo biyo xireenka oo qaadi kara 74 bilyan oo kubik meter oo biyo ah.